I-Core Post Ihambisa i-Sky One's Brassic ku-HDR nge-DaVinci Resolve - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Core Post Ihambisa i-Sky One's Brassic ku-HDR nge-DaVinci Resolve
I-Fremont, CA - Septhemba 10, 2019 - I-Blackmagic Design namuhla umemezele ukuthi indawo yokuposa yase-UK, i-Core Post, inwebise amakhono ayo wokukhiqiza okuthunyelwe ukuhlinzeka ukulethwa kwe-HDR kumakhasimende okusakaza nokukhiqiza ngokusebenzisa ukuhamba kwawo okukhona kweDaVinci Resolve Studio.
Indlu ephelele yeposi, ese-Salford's Media City, yathuthukisa indawo yayo yokulungiswa kombala nge-Scan 3XS crate ye-realtime 8K playback ne-4K 1000 nit EIZO track track. Iphrojekthi yokuqala ezotholakala ngepayipi elisha idrama yamahlaya kaSky One, iBrassic, eyakhiwe nguDanny Brocklehurst kanti lo nguJoe Gilgun waseNgilandi. Umsebenzi we-VFX kulo lonke uchungechunge waphinde waqedwa nge-Fusion Studio kaTanvir Hanif kwa-Digital Imaging fx.
Ifakwe eNyakatho Ntshonalanga yeNgilandi, umdlalo weshashalazi ulandela iqembu labangane abasebenza kanzima abathola izindlela ezingekho emthethweni zokuphumelela empilweni. I-MD ye-Core Post, uMat Brown, uchaza ukuthi iqembu lokukhiqiza lifuna ukulethwa kwe-HDR kuqinisekiswe ukuthi isici sinomazisi onesibindi, onesitayela onobuhle obunamandla kakhulu be-cinema.
"Lonke lolu chungechunge lucitshwe kahle, futhi besifuna ukugcina ubuningi bemibalabala nombala; futhi yize kunezindawo eziningi zasemadolobheni, besingafuni ukubonwa njengesihlahlo kanye nokubukeka okumpunga kwasenyakatho, ”kusho uMat. "Bekungokokuqala iqembu lokukhiqiza lidubula ukulethwa kwe-HDR, kodwa sonke sanquma ekuqaleni ukuthi singazibukeli izinto, kodwa esikhundleni salokho sigxile ekutholeni yonke imininingwane esizoyidinga ukuthumela."
Uchungechunge ldutshulwe ku-2.35.1 anamorphic, lapho i-4K rushes iguqulwe yaba yiCinemaScope. Imikhombandlela yokunqampuna kusethi futhi Xazulula amathuluzi wokuhlikihla kokuthunyelwe kuqinisekiswe ukubiyela okuyilo kulo lonke. UMat wabe esesebenza ebangeni le-HDR esebenzisa ijika le-PQ, elasiza ukukhiqiza ibanga lemvelo impela.
"Ijika le-PQ lizwakala sengathi limpompela inani elifanele lokukhanya esithombeni ekuqaleni. Kwesinye isikhathi kwa-SDR, abelungu bangezwa bevinjiwe noma kungamazinga aphezulu, futhi uvame ukuzizwa sengathi kufanele ulwe ukuze uthole ukukhanya okwenele ukufanisa ukubukeka kwempilo yangempela. NginoBrassic, ngangidonsela ibanga phansi kulokho okwakuzwakala njengamazinga emvelo, kunokuba ngicindezele i-gamma njengoba ngangizodinga ukusetha kwe-SDR. Ithuluzi lokuphatha imibala laliyisici esihle ekuqinisekiseni ukuthi yonke into esemugqeni wesikhathi ifanelekile. ”
Lapho nje ibanga le-HDR seliphelele, uMathe waletha inguqulo ye-SDR ne-Dolby Vision plug wangena wabe esedlulisa isivinini ukuze acwenge lelo banga ngefomethi ehlukile.
“Sifunde lukhulu kulo msebenzi. Isibonelo, izigcawu ezinamalambu akhanyayo we-neon strip noma amafasitela amakhulu ngemuva angavela akhanyeke kakhulu ngenguqulo ye-HDR, ukuthi izinhlamvu zingavela zigqamile. Kodwa-ke kusekhona inani elilinganisiwe lemininingwane ngaphambili nakwizimpawu zabo; kumane nje iso lethu lingakwazi ukujwayela lolu luhlu lokukhanya, olunomkhawulo endaweni encane yesikrini. Konke lokhu bekudinga ukucatshangelwa, njengoba lezi zinkinga zingeke zibe nzima ku-SDR. Ngaleso sikhathi kwakuyicala lokwenza ushintsho olucashile ebangeni elincane ukuze kuqinisekiswe ukuthembeka kombono wokuqala wokudala kugcinwa kuzo zombili izinto ezidingakalayo. ”
"Kube yinto emnandi yokufunda kithina sonke esibambe iqhaza ngephrojekthi ye-Brassic, futhi sijabulele indlela uDavV Res Resveve ebonakalayo esebenza ngayo," kuphetha uMat.
Izithombe zomkhiqizo zeDaVinci Resolve Studio, Fusion Studio nakho konke okunye I-Blackmagic Design imikhiqizo iyatholakala ku www.blackmagicdesign.com/media/images.
I-Fusion Studio Isetshenziselwe Ukwakha Isici Sokuphapha, i-Latte ne-The Magic Waterstone - Disemba 11, 2019
Uhlaka.io lwenza umthwalo walo ku-iPad - Disemba 10, 2019
Umklomelo weTrans Thanh Huy woMklomelo weFilimu oHlangabelwe ngeRaVinci Resolve Studio - Disemba 9, 2019
2015 Memezela i-Aurora Health Campaign / I-Colonie ukuncipha kwe-bitrate I-Blackmagic Design Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Ukusakazwa-Abezindaba Komphakathi Ukusakaza-SocialMedia Ukusakaza-SocialMeida CES2017 Ukuhlela I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor H264 / H265 HDR I-HDR / i-WCG HEVC HEVC / AVC Immersive i-isovideo I-JCT-VC I-MStar ukunciphisa komsindo ukukhiqizwa kokuthunyelwe SJGolden - SoftAtHome Ama-spears nama-Arrows I-Colonie I-Colonie - Izindaba I-COLONIE / Chicago Ubuchwepheshe be-TV I-TVU Izinethiwekhi UHD / 4K / HD i-viarte Umlingisi wevidiyo Warsaw	2019-09-10
Ngaphambilini: Amasistimu wePebble Beach Amemezela Imiphumela Yezimali Yonyaka wokuqala we-2019
Olandelayo: I-Aperi Showcases Latest Innovations ku-Virtualization Yeqiniso kanye ne-Container-based Live IP Media Workflows e-IBC2019